डेंगु बढ्यो, राजधानीसमेत जोखिममा
काठमाडौं । वैशाखमा पहिलोपटक सुनसरीको धरानमा देखिएको डेङ्गु अहिले देशभर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । राजधानी उपत्यका नै डेङ्गुको जोखिममा परेको छ । ज्वरो आएर अस्पताल जाने आधाजति बिरामीमा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिन थालेको जानकारी चिकित्सकले दिएका छन् ।
पछिल्लो समयसम्म डेङ्गुको सङ्क्रमण ४२ जिल्लामा फैलिइसकेको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेका छन् भने चिकित्सक तथा नर्सहरूमा समेत डेङ्गु सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । डेङ्गुको उच्च जोखिम बढेपछि नियन्त्रणका लागि सरोकार निकाय क्रियाशील भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरोकार सबै पक्ष मिलेर डेङ्गुविरुद्ध अभियान चलाउन आह्वान गरेको छ ।
नेपालको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दुई चिकित्सक, तीन नर्स, तीन कार्यालय सहयोगी र पारामेडिक्ससहित ११ जनालाई डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौंँमा डेङ्गु उच्च जोखिमका रूपमा देखा परिसकेको जानकारी दिँदै सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
दुई जना डाक्टरसहित नर्स, पारामेडिक्स र कार्यालय सहयोगीसम्मलाई डेङ्गुको सङ्क्रमण भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'तीमध्ये एक जना डाक्टर काममा फर्कन थालिसक्नुभयो, अर्का एक जना भने उपचारपछि घरमै आराम गरेर बस्नुभएको छ ।' नर्स, पारामेडिक्स लगायतको टेकु अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।
निर्देशक डा. पाण्डेले अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स र पारामेडिक्स लगायतलाई डेङ्गु भएकाले सर्वसाधारणको उपचारमा समेत बाधा पुगेको उनले बताए । उनले भने, 'पहिलेदेखि नै टेकु अस्पतालमा जनशक्ति कम भइरहेको थियो, ११ जनालाई डेङ्गु भइसकेपछि उपचार गर्न समस्या परिरहेको छ ।' डेङ्गुको जोखिम देशभरि भइरहेको अवस्थामा टेकु अस्पतालमा दैनिक पाँच सयदेखि एक हजारसम्म बिरामी डेङ्गुको आशङ्कामा आउन थालेका छन् । मङ्गलबार डेङ्गु परीक्षण गरिएका अधिकांशमा डेङ्गु पोजेटिभ अर्थात् डेङ्गु देखिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
सरुवा रोग अस्पतालका ल्याब प्रमुख परमानन्द भण्डारीले मङ्गलबार डेङ्गु परीक्षण गरिएका अधिकांश व्यक्तिमा डेङ्गु पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो । उनले बुधबार पनि २४७ जनाको डेङ्गु परीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै त्यसको रिपोर्ट बिहीबार मात्र आउने बताए । डेङ्गु सङ्क्रमित अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकावासी हुन् । गाेरखापत्रमा समाचार छ ।